Sida loo noqdaan kuwo caafimaad qaba | Macluumaad loogu talagalay qaxootiga iyo doolka | USAHello
Sida loo noqdaan kuwo caafimaad qaba iyo ka hortagga cudurada
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad samayn karto si aad caafimaad. Talooyin Read ku saabsan sida loo noqdaan kuwo caafimaad qaba. Baro sida looga hortago faafidda cudurrada iyo cudurada. Read oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay hurdada iyo sida loo joojiyo sigaarka.
Ku dhaq gacmahaaga
Gacmaha lagu dhaqdo waa waxa ugu muhiimsan ee aad adiga iyo qoyskaaga caafimaad haysan karto. Tani waa sababta oo jeermiska badan keena xanuunada waxaa lagu faafiyaa xirriirka gacanta.
Hubi inaad dhaq gacmahaaga ka dib marka aad hindhisto ama qufac, ka hor inta diyaarinta cuntada, ka dib markii aad isticmaashid musqusha, ka dib markii aad taabato qofka jirran, ka dib marka aad xamili qashinka ama saxarada, iyo ka dib marka aad taabto xayawaan.
Waxaad badan oo ku saabsan baran kartaa sida saxda ah dhaq gacmahaaga.
Is ogow of ilkaha
Daryeelka afka iyo ilkaha waxay muhiim u tahay iska ilaalinta dhibaatooyinka caafimaadka. Dhakhaatiirta ku talinaynaa in aad cadaydo ilkahaaga laba jeer maalintii iyo dunta hal mar maalintii. Sidoo kale waa inaad soo booqato nadaafadda ilkaha xafiiska dhakhtarka ilkaha ee lixdii bilood ee kastaba mar si ilkaha lagaaga nadiifiyo oo laga fiiriyaa. Waxaad ka akhrisan kartaa sida ay u is ogow ah ee afka iyo ilkaha.
Looga hortago faafidda hergebka iyo ifilada
cudurrada qaarkood, sida hergebka ama ifilada qaba, si fudud u fidi u dhexeeya dadka.
Waxaa jira saddex waxyaalood oo muhiim ah oo aad samayn karto si ay u ilaaliyaan dadka kale ka qabow ama ifilo waa qaadaan:
1) Daboolista sankaaga marka aad hindhisto
2) Daboolaya afkaaga marka aad qufacaysid
3) Dhaqdo gacmahaaga mar kasta oo aad hindhisto iyo qufac
Baro badan oo ku saabsan sida si looga hortago faafidda hergebka iyo ifilada.
The Centers for Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) waa hay'ad dawladeed oo ku siinayaa talo ku saabsan sida si aad caafimaad. CDC waxay leedahay macluumaad ku saabsan sida si looga hortago faafidda cudurka guriga, shaqada, dugsiga, iyo in dadweynaha.
Injirta madaxu waa cayayaan yaryar oo ku nool madaxdii aadanaha. Waxay u noolaadaan by quudinta on dhiig dusha sare ee madaxa ka, keenaya dareen xoog cuncun iyo lur. Injirtu waxay ku faafi karaa si fudud qof ka qof iyo waa dhibaato aad caadi u ah carruurta. (Injirta inta badan faafin halkaas oo ay jiraan kooxo carruurta, tusaale ahaan dugsiga ah.)
Haddii adiga ama ilmahaagu aad leedahay injir, ma aha calaamad u ah nadaafad saboolka ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaad yeelan doontaa in ay qaadan talaabooyin gaar ah si ay u hubiso in dhibaatada iska tagaa. badan oo ku saabsan injirta madaxa.
Similar in ay injirtu, dhilqe waa cayayaan yaryar oo in qaniini aadanaha, keenaya cuncun iyo cuncun daran on maqaarka ku xeeran qaniinyada. Si ka duwan injirta, dhilqe ku nool gaar ahaan alaabta iyo dharka.
Dhilqe faafi karaa si fudud u dhexeeya dadka, sidaa daraadeed waxa muhiim ah in aad ogaatid sida si looga hortago in. Waxaad baran kartaa luqado badan oo ku saabsan calaamadaha dhilqe iyo sida loo xakameeyo dhibaatada. Macluumaadka waa in afaf badan.
Hurdo fiican habeenkii waa muhiim u ah caafimaadka jidhka iyo maskaxda. dadka waaweyn badankoodu waxay u baahan tahay 7 in 8 saacadood oo hurdo ah habeen.
Horumarinta caadooyinka jiifka caafimaad
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin hurdada caafimaad:
Samee jimicsi maalin kasta.
Tag sariirta habeen walba waqti isku mid ah.
Raac dhaqan waqti sariir.
Iska ilaali ileys aad u ifaya ee wakhtiga habeenkii.
Iska ilaali cunto culus ee wakhtiga habeenkii.
Dami qalabka elektarooniga ah sida aad telefoon iyo computer saacad ama laba ka hor inta aadan seexan.
Waad ogtahay waxa adiga kuu fiican, sidaas raac aad hanuun u gaar ah!
akhri American Academy of talo Hurdada Medicine ee ku saabsan hurdada caafimaad.
Hurdo for kids
Waxaa si gaar ah muhiim ugu tahay carruurta si aad u hesho hurdo fiican habeenkii. Carruurtu waxay u baahan hurdo ka badan dadka waaweyn. Waxaa si gaar ah muhiim u ah horumarinta jidhka iyo maskaxda. Adiga iyo carruurtaada ka akhrisan kartaa talooyin hurdo ka National Sleep Foundation. Marka aad hubiso kids aad u hesho hurdo ku filan, aad u diyaarinaya fiican ee dugsiga in ay sameeyaan. Isla mar ahaantaana in aad iyaga ka caawinaya inuu yeesho dabeecado caafimaad noloshiisa oo dhan.
Waxaad noqon doontaa yaabay oo ku saabsan farqiga u waxa ay taasi si aad u hesho hurdo ku filan! Ha illoobin in ay ku faafi erayga ee bulshada oo ku saabsan faa'iidooyinka hurdada.
Sidee si ay u joojiyaan sigaar cabidda
Dadka bilowdo sigaarka sababo kala duwan. Waddamo badan oo aadan bixin macluumaadka ku saabsan saamaynta waxyeello sigaarka oo sidaas daraaddeed sigaarka waa caado ka. Wax alla wixii sabab ahaa laga bilaabo in sigaar, sigaar joojintii noqon doonaa waxtar u leh caafimaadkaaga. Sigaar keenaysaa in kansarka iyo cudurada kale oo halis ah.
Sigaar geystaa ku dhawaad ​​kasta oo xubin ka mid ah jidhka. Waa sababta ugu weyn oo dhimashada laga hortagi karo. Sigaar kordhisaa halista in aad si ay u horumariyaan shuruudaha soo socda:
Neefta oo labaad qiiq
Halista inta aad uurka leedahay
Joojinta sigaarku waa adag yahay qof walba. The dheer aad sigaar cabbin, waa ku sii adkaanaysaa! Tani waa sababta oo sigaarka waa la qabatimo. Ma aha in aad si aad u keli ahaantayda ma samayn. U sheeg dhakhtarkaaga oo ku saabsan xiisaha aad joojinta si aad u hesho caawimo, sida kiniin ama balastar ah oo ka caawin doona ka dhigi habka fudud. Baro sigaarka iyo sida loo tago ka CDC ee.
Products si ay u caawiyaan stop sigaarka waxaa ka mid ah:
Note: Haddii aad ku qoran tahay Medicaid markaas wax kaa caawinaya in aad sigaarka joojiso waxaa looga hadli doonaa qorshaha caymiska. qorshayaal badan oo gaar loo leeyahay ayaa sidoo kale dabooli doonaa qalabka kuwan.
daryeelka caafimaadka dumarka
Halkee si ay u iibsadaan cunto caafimaad leh